Galaxy S9 အတွက် “Over the Horizon” ringtone အသစ်ကိုချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung! – AsiaApps
February 20, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S9 အတွက် “Over the Horizon” ringtone အသစ်ကိုချပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung!
Samsung ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ကပဲ Galaxy S9 အတွက် ၂၀၁၈ “Over the Horizon” ringtone အသစ်ကို youtube channel မှာချပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ “Over the Horizon” ringtone ဟာတော့ 2011 ကစတင်ပြီး Samsung Galaxy ဖုန်းတွေမှာ Default ringtone ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Galaxy အမျိုးအစားအသုံးပြုသူတွေအတွက်တော့ စိမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Samsung အနေနဲ့ “Over the Horizon” ကို ၂၀၁၁ ကစတင်ပြီး version အမျိုးအမျိုးဖန်တီးပြောင်းလဲခဲ့ရာ အခုဆိုရင် ၂၀၁၈ version တောင်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ဘယ်လိုတွေဖန်တီးပြောင်းလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးသိရှိနိုင်မှာပါ။
Over the Horizon 2018 ကတော့ညိမ့်ညောင်းသာယာမှု အပြည့်အဝပါဝင်တဲ့ Ringtone တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။ Ringtone မှာပါဝင်တဲ့ ညိမ့်ညောင်းသာယာမှုက မိတ်ဆွေရဲ့ စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေရုံသာမက နာမ်ကိုပါအားပြည့်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ Samsung ကိုယ်တိုင်ကကြေညာပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Galaxy S9 ကိုတော့ မကြာခင်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။ ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အချိန်က လပိုင်းလောက်လိုသေးတာကြောင့် ပိုက်ဆံစုထားကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးလိုက်ပါတယ်။